Ndezvipi Zvisina Kuroora, Zvinosimbiswa, uye Double Sarudza-Kupinda? | Martech Zone
NeChishanu, Gunyana 9, 2016 NeChishanu, Gunyana 9, 2016 Douglas Karr
Zvisinei nerudzii rwekushambadzira mameseji iwe auri kuita, iwe unofanirwa kupa nzira kune anonyorera kuti apinde-mukati kune iwo mameseji. Nyika zhinji nemitemo yekutengeserana inosimbisa imwe mhando ye anti-spam mirau, saka kunyora masosi nezviitiko zvehunhu zvakakosha. Heano maitiro:
Kuroora Kumwe-Kupinda - Iyi ndiyo nzira yakajairwa yeemail uye meseji yekupinda-mukati. Iye anonyoresa anoisa saiti kana kuunzwa nekambani muchikuva chekutumira mameseji. Iko mukana weyechete -kupinda-mukati iri mune yakapfava, isingade imwe yekudyidzana. Kupunzika kweiyo imwechete yekupinda-mukati ndeyekuti fomu rako rinogona kunongedzerwa uye spam misungo kero inyore yakanyoreswa kune yako runyorwa. Unogona kuwana maemail ako akavharirwa mumugwagwa. Kubatsira kwekusarudza-kamwe chete ndeyekuti vashandisi vanowanzo pinda-kunyoreswa asi havazotora mamwe matanho nemaitiro maviri-ekupinda-mukati.
Kuroora Kumwe-Kupinda neChivimbiso - Iyi ndiyo tsika yakanakisa yekunyorera imwe-meseji kunyorera asi kazhinji ichiregeredzwa. Meseji yakanaka yekutambira inosimbisa kuti munhu anonyorera apinda uye anoisa zvinotarisirwa pane kuti meseji dzinotumirwa kangani uye kukosha kwavanounza iye anenge achinyorera izano rakakura.
Kaviri Sarudza-In - Mapuratifomu ese ekutumira mameseji anoda kuti iwe ushandise iyi nzira nekuti inoderedza chero njodzi yekunyunyuta kwe spam. Anonyorera anopinda mukati kuburikidza nefomu, kupinza, kana meseji meseji. Izvo zvinoteverwa neiyo pakarepo meseji yekusimbisa iyo yekupinda-mukati. Kana iri email, ivo vanofanirwa kubaya pane iyi link muemail. Kana iri meseji, ivo vanofanirwa kupindura neyekuvimbiswa kuti varikupinda mukati.
Kune zvekare imwe psychology inosanganisirwa nekaviri kupinda-mukati:
Iyo mbiri yekupinda-mukati inodonhedza pasi kune yekudzokorora musimboti, a wekutanga mutemo wezvemagariro psychology izvo zvinoti mune dzakawanda mamiriro ezvinhu munharaunda, isu tinodzorera izvo zvatinogamuchira kubva kune vamwe. Tanga hukama nekukuratidza kuti unoremekedza munhu - uye iyo email kero iyo yavanokupa - uye iwe unozvimisikidza wega kudzoka mune zvese zviri zviviri kudzokorora uye yakavhurika mitengo.
Iyi infographic kubva kuSalesforce, Maitiro ePsychology Angaite Sei Kuti Emai Eko Atore Kufadza, inofamba nemhando yega yega yekusarudza-mukati uye inokurukura nzira dzekuita yako email ruzivo kuti uwedzere kubatanidzwa uye udzikise kusazvinyora uye SPAM mishumo. Iyo zvakare inobata kusarudzika uye kugadzirisa misoro yemisoro yekuwedzera kubatanidzwa.
Tags: yakasimbiswa opt-inpinda kaviri-mukatikamwe chete-kupindachii chinonzi meseji yekusimbisachii chakapetwa kaviri kupindachii chimwe chete chekupinda-mukati